Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fampitandremana momba ny fahasalamana any Canada: Tsy mahasalama loatra ireo mpanadio tanana
Ny Health Canada dia manoro hevitra ny Kanadiana fa tsaroana ireto mpanadio tanana manaraka ireto satria mety hiteraka risika ara-pahasalamana.
Ny Health Canada dia mitazona ity lisitr'ireo mpanadio tanana izay mety hampidi-doza ho an'ny fahasalamana, mba hahafahan'ny Kanadianina hamantatra mora foana ny vokatra novidiny sy handray fepetra mifanaraka amin'izany. Amporisihina ny Kanadiana hanamarina izany tsy tapaka ho an'ny fanavaozana.
Product Loza ara-pahasalamana Company NPN na
Din Isan'ny be Lany daty amin'ny Hetsika natao
avy amin'ny CN Pharma; ShieldPlex Tsy vokatra
nahazo alalana tamin'ny
Group Inc. 80098091 dc2005np001 db042120 dc2005np002 db42120 Aprily 2023 Aprily 2023 Aprily 2023 Aprily 2023 Notsiahivina ny vokatra
ambaratonga ambony Fanahy Rock 80098012 20121 20122 20128 20156 20160 Aprily 2022 May 2022 May 2022 June 2022 June 2022 Notsiahivina ny vokatra